Isevisi Yezingxenye Zomshini Wokuguqula | Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Daohong Precision isebenzisa advanced CNC lathes ukukhiqiza izingxenye waphenduka futhi izingxenye zazo zonke izinhlobo. Sisebenza kusuka ekwakhiweni kwamakhasimende ukukhiqiza izingxenye eziphezulu ezinembayo ezihlangabezana nezidingo zazo ngqo. Kusukela ezingxenyeni ezilula kuya kwezinabile kakhulu, singaletha cishe noma iyiphi ingxenye ephendukile ongayicabanga.
Izingxenye Ezincane Eziphakathi Kujikwe Zonke Izimboni Nezicelo
Ngama-latis ama-multi-axis kanye ne-software ye-state-of-the-art design, umnyango wethu wangaphakathi we-lathe ungakhiqiza izingxenye eziguqukile ukufanisa noma yimiphi imiklamo. Singanikeza izingxenye eziguquliwe ezinamadayimitha amancane njengo-1/16 ”aze afike ku-10” noma ngaphezulu. Ubuchwepheshe be-CNC busenza sikwazi ukuguqula ngokunembile ama-geometri ayinkimbinkimbi futhi sibambe ukubekezelelana okungu- ± 0.0005 ”noma okungcono
Izingxenye eziphenduliwe zisetshenziselwa izimboni eziningi nezinhlelo zokusebenza.
Imishini yethu yokufaka imishini ifaka umshini othomathikhi wesitayela waseSwitzerland onama-spindles ayi-15,000 RPM afinyelela ukubekezelelana okuqinile njenge- ± 0.0005 ″, ithuluzi eliningi le-4-axis CNC lokugaya nokujika izikhungo, i-CNC lathes enamathuluzi abukhoma akwazi ukusebenza kumadayimitha amancane njengo-0.010 ”, Kanye nemishini ye-4-Axis CNC yocingo ye-EDM esebenza kumadayimitha amancane njengo-0.0005 ″. Kuhlanganiswe namandla ethu okusika, ukugaya, ukuqabula nokupholisha, izikhungo zethu zemishini zisenza sikwazi ukunikela ngezixazululo ezihlanganisiwe ezinciphisa izikhathi zokukhiqiza kube nzima ukwenza umshini wezinto ezincane ububanzi.